ရွှေနိုင်ငံ: စာအုပ်ဖတ်ခြင်းဖြင့် လက်တွေ့လောကဘ၀ကို အထောက်အကူပြုစေမည့် သိပံ္ပနည်းကျအချက် ၁၀ ချက်
လူအများစုတွေဟာ စာအုပ်ဖတ်ခြင်းကို ၀ါသနာအရသော်လည်းကောင်း၊ ဗဟုသုတရလိုသောကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ တစ်ကိုယ်တည်းသီးသန့်နေလိုသောကြောင့်သော်လည်းကောင်း စသဖြင့် ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ ဖတ်ရှုကြပါတယ်။ သို့သော်လည်း စာဖတ်ခြင်းအားဖြင့် သင့်ရဲ့ ပြင်ပလူနေမှု ဘ၀ကို အပေါင်းသင်္ကေတဖြစ်စေမဲ့ အချက်တွေကို သင်သိ သွားမယ်ဆိုလျှင်တော့ အံအားသင့်မှာပါ။
လေ့လာ တွေ့ရှိချက် အရ တစ်နေ့ကို စာအုပ် ၂ နာရီခွဲခန့်ဖတ်တဲ့သူတွေဟာ မဖတ်တဲ့သူတွေထက် အသက်အရွယ်ကြီးလာရင် အယ်ဇိုင်းမားရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေနည်းပါတယ်။ စာဖတ်ခြင်းအားဖြင့် ရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်မှာလို့ ဆိုထားခြင်းမဟုတ်ပေမဲ့ စာဖတ်ခြင်း နဲ့ ရောဂါကာကွယ်ခြင်းတို့ဟာတော့ အနည်းငယ်ဆက်နွယ်နေပါတယ်။
2. နေ့စဉ်စာဖတ်ခြင်းအားဖြင့် နေ့စဉ်အကြောင်းအရာသစ်တွေကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။လေ့လာသူများရဲ့ သုတေသန မှတ်တမ်း မှာ ဖော်ပြထားချက်အရ စာဖတ်ခြင်းဟာ သင့်ကို ယခုထက်ပိုပြီး အသိပညာတွေတိုးပွားလာစေမှာဖြစ်တယ် လို့ ဖော်ပြထား ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ မှတ်ဥာဏ်ထဲမှ ဗဟုသုတတွေကို ပြန်လည် ဖော်ထုတ်နိုင်စွမ်းရှိသလို အနာဂါတ်မှာလည်း မမေ့ပျောက် သွားအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ အာရုံစိုက်သည်ဖြစ်စေ မစိုက်သည်ဖြစ်စေ စာများများဖတ်ပါက သင့်ဦးနှောက်မှာ သတင်းအချက် အလက်တွေ အသစ်ဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
3. စာဖတ်သူအများစုဟာ များသောအားဖြင့် ရွေးချယ်မှု၊ လေ့ကျင့်မှု စသည်တို့ကို မှန်ကန်စွာ ပြုလုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ National Endowment for the arts အဖွဲ့မှ လေ့လာသုံးသပ်ချက်အရ စာဖတ်ခြင်းဟာ ဘ၀တစ်လျှောက် အသုံးဝင်တဲ့ အမူ အကျင့်ကောင်း တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ဘ၀တက်လမ်းတိုးတက်ဖို့အတွက်လည်း အခွင့်အလမ်းများကို ရှာဖွေရယူနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြ ထားပါတယ်။
Cristel Russell ရဲ့ အဆိုအရ စာဖတ်ခြင်းဟာ ဘ၀အမောတွေဖြစ်တဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ စိတ်ရှုတ်ထွေးမှုတွေကို ခဏတာ ကူညီဖြေဖျောက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်စိတ်ပင်ပန်း လူပင်ပန်း ဖြစ်နေတဲ့ အချိန် သို့မဟုတ် အနားယူဖို့လိုအပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ကောက်ဖတ်ပြီး ဘ၀အမောတွေကိုဖြေလျှော့လိုက်ပါ။
သင် စာဖတ်တဲ့ အကြိမ်တိုင်းမှာ သင့်ဦးနှောက်က အကြောင်းအရာအသစ်တွေကိုဝင်ဆန့်နိုင်ဖို့ အခန်းသစ်တစ်ခုဖွဲ့ပေး ပါတယ်။ ဒီနေရာလွတ်ဟာ သင်လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်တွေ သင်လိုချင်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဖြည့်စည်းပေးသွားမှာပါ။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ စာဖတ်ခြင်းဟာ သင့်ကို ပိုပြီး ဥာဏ်ရည်ဥာဏ်သွေးကောင်းသူတစ်ယောက် အဖြစ် အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အမြင်မှာ ထင်မြင်စေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမျိုးသားတွေနဲ့ အနေနဲ့ စာဖတ်သည့်ဟန်က အမျိုးသမီးတွေကို စွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။
7. စာဖတ်ခြင်းအားဖြင့် အသေးစိတ်ကျကျတွေးခေါ်နိုင်မှု အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ပေးပါတယ်။
စာဖတ်ခြင်းအားဖြင့် စာရေးရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ စကားလုံးအထားအသိုတွေကို မှတ်မိနိုင်စွမ်းရှိလာစေပါတယ်။ ဒီအချက်ဟာ တချို့သော စာရေးခြင်း အားဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုသည့် အလုပ်တွေမှာဖြစ်စေ သို့မဟုတ် အခြားသော အသက်မွေး ၀မ်းကျောင်း အလုပ်များမှာဖြစ်စေ အရေးပါ ပါတယ်။
Buffalo တက္ကသိုလ်မှ ပညာရှင်များရဲ့ သုံးသပ်ချက်အရ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ဝတ္ထုများကို ဖတ်ခြင်းအားဖြင့် အသစ် အသစ်သော ခံစားမှုများ လှုပ်ရှားမှုများကို ပြုလုပ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီအချက်ဟာ မတူကွဲပြားခြားနားတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု နဲ့ လူမျိုး များကို လက်ခံနားလည်လာစေပါတယ်။
Honor Wilson-Fletcher မှ ပြောကြားချက်အရ “ တံခါးကို ဖွင့်လိုက်ပါ ဘ၀ကို အေးအေးဆေးဆေးနေ လိုက်ပါ။ နောက် ဆုံးနေ့ကို ရောက်လာတဲ့ အခါမှာတော့ သင်ဘယ်စာကို ဖတ်နေလဲဆိုတာ အရေးမကြီးတော့ပါဘူး။ ဒီအရာသည်သာ မင်းကို အကောင်းဆုံးပေးမဲ့ ဖျော်ဖြေမှုပဲ “ လို့ ဘ၀မှာ အောင်မြင်ချင်တဲ့ လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ စာဖတ်ခြင်းဟာ ဘယ်လောက် အရေးကြီးကြောင်း ရှင်းလင်းစွာပြောဆိုထားပါတယ်။